Umkhiqizi waseChina weCeramic Conical Burr Yomshini Wekhofi, I-Coffee Grinder, Umenzi Wekhofi, Umshini Wokuxubha Nge-Conical Burr for Coffee Mill, I-Stainless Steel Premium Ceramic Burr
Home > Imikhiqizo > I-Ceramic Grinding BurrI-Ceramic Conical Burr ye-Coffee grinder
Izigaba zomkhiqizo we- I-Ceramic Conical Burr ye-Coffee grinder , singabakhiqizi abakhethekile abavela eChina, I-Ceramic Conical Burr Yomhlahlandlela Wamafutha KaKhawa , I-Manual Coffee Grinder abahlinzeki / ifakethe, imikhiqizo yekhwalithi ephezulu ye- I-conical Burr Mill for Ukuqapha Ukuqapha R & D kanye nokukhiqizwa, sinemisebenzi ephelele emva kokuthengisa nokusekela lobuchwepheshe. Bheka phambili ukubambisana kwakho!
I-AL2O3 i-ceramic yokugaya i-hand coffee maker
99% i-alumina ceramic flat grig yokugaya
I-Ceramic flat milling disc yomshini wekhofi
Isandla sokwenza ikhofi i-alumina ceramic millstone
Intengo yokukodwa: USD 0.59 - 0.68 / Set/Sets
I-ceramic burr ejwayelekile yocam grinder eyenziwe nge-95% aluminium oxide ceramics. Ngenxa yokumelana nokugqoka kwayo, izindleko eziphumelelayo nezenkolo, kuye kwavunyelwa kabanzi ngabakhiqizi abaningi bekhofi. Siyakwazi ukuhlinzeka ngokukhethwa kombala ohlukile ukuhlangabezana nemfuneko yamakhasimende. Ukuze...
Siyakwazi ukuqhubekisa i-varity ye-al2o3 eyenziwe nge-ceramic yokugaya yezinhlobo ezahlukene zomenzi wekhofi. Imvamisa, lezi burr zokugaya ze-ceramic zenziwa ngo-95% we-aluminium oxide ceramics. Ngenxa yokumelana kwayo okungcono kokugqoka, izici ezisebenzayo ezibizayo nezingathandeki, kuye kwamukelwa kabanzi...
I-99% i-alumina ceramic burr milling burr inokukhubazeka okungafani kokugqoka kuneyensimbi eyodwa. Ngenxa yendlela yokukhiqiza injekishini nokucindezela, ukusebenza ngempumelelo kukhiqiza kungaphezulu kwe-CNC machining ye-disc yokugaya insimbi. Futhi kulula kakhulu ukuhlangana ngomshini wekhofi. Besilokhu sinikela...
I-Ceramic flat milling disc isetshenziswa kakhulu emshinini wekhofi we-espresso, obeka indima yokugaya ku-meachine . Izinto eziyinhloko esizisebenzisile i-alumina zisuka ku-95% ziye ku-99% i-alumina, lokhu kusebenza kuyindathane yezakhiwo zabo ezivelele, njengokuphikiswa okukhulu kokugqoka, ukusebenza kahle kokuqina,...
I-alumina millstone esesandleni sekhofi eyakhiwe kahle isebenza kahle kakhulu, ibilokhu isetshenziswa kakhulu kumenzi wekhofi. Imvamisa, lezi burr zokugaya ze-ceramic zenziwa ngo-95% we-aluminium oxide ceramics. Siyakwazi ukuqhubekisa i-varity ye-al2o3 eyenziwe nge-ceramic yokugaya yezinhlobo ezahlukene zomenzi...
I-China I-Ceramic Conical Burr ye-Coffee grinder Abahlinzeki
I-Ceramic conical burr ivame ukwenza ngamaphesenti angu-95 noma angu-99% aluminium oxide. Njengoba i-alumina i-eco-friendly, izinto eziningi ezingagqoki futhi ezibiza izindleko kune-metal burrs, ngakho yamukelwa abakhiqizi bekhofi grinder emhlabeni wonke.
Sinikeze izinhlobo eziningi ezijwayelekile, kufaka phakathi umbala ohlukile, njengezimhlophe, i-grey, ikhofi, umbala omnyama. Kuxhomeke ekudingeni ikhasimende. Sine-prototyping ekwenzeni ivolumu eliphezulu kakhulu. Kungakhathaliseki ukuthi yihlelo lohlelo lwe-R & D ne-oda elincane kakhulu lokulingwa, noma iphrojekthi ephansi ngevolumu ephezulu. Sizokunikeza ikhambi elihle kakhulu kuwe. Ngaphandle kwalokho, sikwazi ukunikeza isevisi ye-ODM.
I-Ceramic conical burr wuhlobo oluvame kakhulu ekhofiji ye-coffee grinder, ikhofi yesikhumba, umakhi wekhofi wekhishi, umshini wokugaya ubhontshisi wekhofi.